ကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒ | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ - မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ အရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည်ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောအခါ Reward Foundation မှသင်ပေးသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို Reward Foundation မှမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Reward Foundation သည်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်သေချာသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားသိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံတောင်းခံပါက၎င်းသည်ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ဖော်ပြချက်နှင့်အညီအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသင်စိတ်ချနိုင်သည်။ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှဤပေါ်လစီအားအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုသင်နှစ်သက်ကြောင်းသေချာစေရန်ဤစာမျက်နှာကိုအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဤပေါ်လစီသည် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂၃ မှစတင်သည်။
အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် twitter လက်ကိုင်အပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ purchasing တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်ပါ
ဒီ website ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာအခြားအချက်အလက်
ကွတ်ကီး ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါတို့ကြည့်ပါ cookie ပေါ်လစီ
သင်၏မေးမြန်းချက်ကိုတုံ့ပြန်ရန်၊ သင်ဆိုင်များမှကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းရန်၊ သင်စာရင်းသွင်းလျှင်သတင်းလွှာတစ်ခုပေးရန်နှင့်ကြော်ငြာသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ပြည်တွင်းဆန်းစစ်မှုအတွက်ဤအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Newsletter မှစာရင်းသွင်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုပါက The Reward Foundation မှနောက်ထပ်စာပေးစာယူကိုရပ်တန့်ရန်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်“ ဆက်သွယ်မှုရယူရန်” စာမျက်နှာမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်၍ သင်၏စာရင်းမှသင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံကြောင်းသေချာစေရန်ကျူးလွန်နေကြပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်, ငါတို့သည်အရပျ၌အကြှနျုပျတို့အွန်လိုင်းစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကာကှယျစောငျ့ရှောကျနှင့်လုံခြုံမှအီလက်ထရောနစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပျထုံးလုပျနညျးအသင့်လျော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထားကြပြီ။
အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ Links များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုစိတ်ဝင်စားမှု၏အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်များဆံ့နိုငျသညျ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ထွက်သွားရန်ဤလင့်ခ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတခါသို့သော်, သင်တို့ကိုကျနော်တို့ကအခြား website ကိုကျော်မဆိုထိန်းချုပ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ လာရောက်လည်ပတ်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များဒီ privacy ကိုကြေညာချက်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြသည်မဟုတ်နေတုန်း သို့ဖြစ်. , ငါတို့သည်သင်တို့သည်အရာမဆိုသတင်းအချက်အလက်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy အဘို့တာဝန်ယူမဖြစ်နိုင်ပါ။ သငျသညျသတိထားလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မေးခွန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သက်ဆိုင် privacy ကိုကြေညာချက်မှာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
သင်၏ဒေတာကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ ၁၉၉၈ အရကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အနည်းငယ်သောအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။ သင်၌ရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်သိမ်းဆည်းလိုပါက The Melting Pot၊ ၅ နှင်းဆီလမ်း၊ Edinburgh၊ EH1998 5PR ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ The Reward Foundation သို့စာရေးပါ။ သင်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်နေသောသတင်းအချက်အလက်သည်မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မပြည့်စုံဟုသင်ယုံကြည်ပါက၊ အထက်ပါလိပ်စာရှိကျွန်ုပ်တို့ထံတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ပါမည်။
ငါတို့ site ကိုသင်ကြည့်နေစဉ် basket အကြောင်းအရာများကိုခြေရာခံရန် cookies များကိုလည်းသုံးမည်။
ကျနော်တို့ယေဘုယျအားနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအသုံးပြုရန်အရာများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်အဖြစ်အဘို့အသငျသညျအကွောငျးကိုအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထား, ကြှနျုပျတို့တရားဝင်ပြုလုပ်ထားရန်ဆက်လက်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့အခွန်နှင့်စာရင်းကိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်6နှစ်ပေါင်းအလို့ငှာအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်သင်တို့၏နာမ, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်ရေကြောင်းလိပ်စာများပါဝင်သည်။
ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှာယူမှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရာတွင်ကူညီပေးသောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေသည်။ ဥပမာ PayPal ။
ယင်းကိုကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု. PayPal ကသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ အသေးစိတ်ကို။